WP Yese Inopinza: Maitiro eBulk Kupinza Chikamu cheTaxonomy muWordPress kubva kuCSV | Martech Zone
WP Yese Inopinza: Maitiro eBulk Kupinza Chikamu cheTaxonomy muWordPress kubva kuCSV
Muvhuro, Mbudzi 15, 2021 Muvhuro, Mbudzi 15, 2021 Douglas Karr
Kambani yangu inoshanda zvakanyanya WordPress kubatanidzwa uye kuita, kutamira matani e data kubva kune zvekare zviitiko kana imwe yemukati manejimendi system (CMS) pamwe chete. Kazhinji, izvi zvinosanganisira kupinza zvigadzirwa zve WooCommerce, kuwedzera nzvimbo mumhando yepositi yakasarudzika, kana kuvaka taxonomy ine zvinozivikanwa zvinopinza. Kana iwe uchida, semuenzaniso, kuwedzera zvikamu nenyika, nyika, kana purovhinzi… unogona kunge uchishanda muWordPress kwemaawa uchiita yekupinda data. Nechemumoyo, pane inoshamisa WordPress plugin iyo inogadzirisa maitiro aya nekugonesa iwe kupinza Comma Yakaparadzaniswa Kukosha (CSV) faira kune chero chinhu mukati meWordPress.
On Martech Zone, tanga tichiwedzera zvedu Zvidimbu peji kusvika padanho rekusabatika. Irwo runyorwa rwakakura rwekutengesa uye kushambadzira tekinoroji acronyms, zvipfupiso zvavo, uye tsananguro yavo. Iro peji rinotakura zvishoma nekuti rakakura uye harina kunyorwa zvakanaka muHTML yekutsvaga organic. Saka, ndiri kuita imwe budiriro pane saiti kuvaka kunze kwetsika post type uye inokonzeresa taxonomy kuitira kuti ndigone kuvandudza kumhanya, kugona kusefa iyo rondedzero, uye yakazara masanji.
Kutanga, ndinoda kuti zvikamu zvealphanumeric zvipe kune acronym yega yega, kubva pa0 kusvika pa9 uye A kusvika paZ. Kuwedzera izvo zvinotora nguva yakati rebei, saka ndakagadzira faira reCSV rine zita rechikwata, slug, uye tsananguro:
Maitiro ekupinza Chikamu Changu CSV
Nokuwedzera the WP All Import plugin, ndinogona kufamba nyore kuburikidza ne wizard yavo kurodha iyo CSV, mepu minda yangu, kuseta yakasarudzika identifier, templatize chero mimwe minda, uye pinza iwo mapoka.
Ikozvino, ini ndinogona kudzokera kune tsika taxonomy yandakavaka muWordPress (ndakaidaidza kuti Alphabet) uye iwe unogona kuona kuti ese emapoka ane mazita nemazvo, slugs akaiswa, uye tsananguro dzakazara vanhu. Uye, pachinzvimbo chekupedza awa pakuita izvi, zvakangotora maminetsi mashoma!
Ongorora: Yangu acronmy mhinduro ichiri kuvandudzwa saka hauzoione kana ukadzvanya nhasi. Iva wakangwarira munguva yemberi iri pedyo, kunyange zvakadaro!
WP Yese Inopinza: Zvimiro
Ndiri kufadzwa neWP Yese Import zvekuti ndakaiwedzera kune yedu Akanakisa eWordPress plugins list. Ndakatengawo rezinesi rakazara refemu yangu, rinogonesa matani akawanda kugona, kusanganisira:
Shandisa chero XML, CSV, kana Excel faira
Ngenisa kana Export Data kubva kune chero chinhu muWordPress kana WooCommerce, kusanganisira vashandisi
Inotsigira mafaira akakura kwazvo, uye chero chimiro chefaira
Inoenderana neyakajairwa plugin uye theme minda
Mifananidzo, zvikamu, WooCommerce, Advanced Custom Fields, Custom Post Type UI, nezvimwe.
Yakareruka interface uye inoshanduka API
Zvine simba zvekuronga sarudzo
Edza WP Yese Yekupinza Sandbox Nzvimbo WP Yese Yekupinza Plugin
kuburitsa: Ini handisi mubatanidzwa weWP All Import, asi ndiri kushandisa yangu WordPress uye WooCommerce affiliate links mune ino chinyorwa.
Tags: mazitaadvanced tsika mindaCSVcsv importekisipotiekisipoti vashandisikunze wordpressimport categoryimport csvpinza vashandisipinza wordpress zvikamuwoocommerceWordPresswp zvese kupinzaXML
SocialBee: Iyo Diki Bhizinesi Social Media Platform ine Concierge Services